४ पुस - चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि कला क्षेत्री मेडम अलिक भावुक हुनुभयो। केदर तिमल्सेना मनका गरिब थिएनन्। उनले हामीलाई सक्दो सहयोग गरे र मुसहर बस्तीमा लगे। खासमा सिङ्गो बस्ती नाङ्गै थियो। लुगा लगाउनुको अर्थ यस्तो हैन कि केवल लाज मात्र ढाकोस्, जाडो नछेकोस्। डाँडामाथिको घामजस्ता बुढाबुढीहरुको बिजोग थियो...
४ पुस - युवा भन्छन्, ‘कामै पाइँदैन,’ व्यवसायी भन्छन्, ‘कामदारै पाइँदैन।’ दैनिक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्छन्। पोखरामा मात्र त्यति नै संख्यामा सधैँ दक्ष कामदारको अभाव हुने गरेको छ।
३ पुस - कुनै पनि मुलुकको सफ्टपावर अर्थात् संस्कृतिले जति खुलापन धारण गर्दछ त्यति नै अन्तरदेशीय भावनालाई प्रगाढ बनाउँछ। अहिले खुलापनतर्फ उन्मुख भएको चीनले सांस्कृतिक आदानप्रदानको सम्बन्धलाई जनस्तरमा सबल पार्ने माध्यमहरु खोजिरहेको छ। त्यसकै एउटा कडीका रुपमा कन्फ्युसियस कक्षामार्फत् चीनले हालसम्म विश्वका १...
३० मंसिर - सामान्य अवस्थामा आफूलाई मन परेका गीतबारे बोल्नु कुनै ठूलो वा गाह्रो कुरा होइन। तर जब एउटा लेखक/श्रोताले ती गीत मन पर्नुका कारणबारे बोल्छ वा लेख्छ, तब त्यो चुनौतीपूर्ण काम बन्छ। उसले गर्ने विश्लेषण र व्याख्याले समाजमा संगीतलाई बुझ्ने दृष्टिकोण निर्माणमा समेत प्रभाव पार्छ। भूपिनका लागि गीत छनोट...
२८ मंसिर - जिन्दगीका सबै इच्छा पूरा भइसके रे कान्छाका। अब बाँकी रहेको समय भगवानमै समर्पण गर्न चाहन्छन् उनी। उनका लागि सबैभन्दा ठूलो भगवान त सगरमाथा नै हो। ‘आज यो नाम्चे र पूरै खुम्बु क्षेत्र जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, त्यो सबै सगरमाथाको कृपा हो,’ उनी भन्छन्, ‘घरघरमा चुलो बलेको छ, जीवन चलेको छ।’
२६ मंसिर - अहिले युवासँग सम्बन्धित प्रश्न नीति–निर्माणकर्ता संस्था र नेताहरूसमेत उठाइरहन्छन्। प्रश्न उठ्नु आफैमा समाधान होइन, तर यसले के संकेत गर्छ भने अब युवाहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै युवाको सवाल प्रमुखताको साथ उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वानकी...
२५ मंसिर - शव लिएर बाहिरिँदा बाकस पखेटा लगाएर उड्नेको लस्कर उस्तै थियो। जुँगाको रेखी भर्खरै बसेका तन्नेरी झोला बोकेर गइरहेका थिए। तिनलाई विदा गर्न आएका तिनका पत्नी बालक च्यापेर रोइरहेका थिए। जाने बाटोबाट तन्नेरी छिरिरहेका थिए भने फर्कने बाटोबाट हामीले बाकस लिएर फर्कंदै थियौँ।
२४ मंसिर - ११ बजेर १२ मिनेट २१ सेकेन्ड जाँदा हामीले माफी माग्यौँ। हामी झुकाउनुपर्ने जति पुरै टाउको र जिउ झुकाएर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै 'आन्याङ्ही खेस्येयो' अर्थात राम्ररी बस्नुहोस् भन्दै दौडियौँ। सामुन्ने फेरि आइसक्रिम पार्लर भेटियो। फेरि हामी एक-एक कोन अइसक्रिम हातमा लिएर चाट्दै हिँड्यौँ।
२३ मंसिर - ‘लास्ट टयाङगो इन पेरिस’को जस्तो आपत्तिजनक दृष्य नेपाली सिनेमामा नहोलान्। तर नेपाली नायिकाहरुले चुपचाप सहेका कहरका कथालाई समाजले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सिनेमा निर्माताहरुले सिनेमा चलाउनकै लागि हिरोइनको दृष्यमाथि ज्यादती गर्ने सोच हामीकँहा नमौलाओस्। यसका लागि अरु देशको बहसले हामीलाई सजगता दिन सक्छ।
१९ मंसिर - नारायणगोपाल! नेपाली सङ्गीत आकाशमा यो भन्दा ठूलो ‘फैलावट’को नाम छैन, आजसम्म। वर्णन पनि असीमित छ। भन्ने र सुन्नेले सबैभन्दा बढी नारायणगोपालकै बारेमा भनेका र सुनेका होलान, नेपाली सङ्गीत मामिलामा।
१३ मंसिर - फिडेल क्यास्ट्रो त्यतिखेर हनोइ (भियतनाम)मा थिए। त्यहीँ उनले चिलीका राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेको हत्या भएको खबर सुने। अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेको भियतनाममा यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा बसिरहनु खतरा हुने ठानेर एलेन्डेको हत्याको समाचार सुनेको एक घण्टाभित्र उनी क्युबातर्फ उडे।...
१७ मंसिर - प्रिय पाकेटमार !! सायद तिमी मलाई चिन्दैनौ होला तर म कमलादीबाट कोटेश्वर जानका लागि नेपाल यातायात चढेको कालो स्विटर प्लस कालै पाइन्ट लगाएको त्यही मनुवा हुँ जसको पर्स तिमीले अनामनगर आसपास उसलाई सोध्दै नसोधी आफैँले उसको गोजीबाट निकालेर लगेका थियौ।
२२ मंसिर - लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा एनजिओ र आइएनजिओहरु लामो समय कलम चलाउनका लागि क्षमता अभिबृद्धि भन्दा पनि छोटो समयका लागि लेखनवृत्ति र परियोजना रिपोर्टका लागि मात्र कभरेजमा केन्द्रित छन्। पत्रकारमा लैंगिक हिंसाको विषय थप केही पारितोषिक र देश-विदेश भ्रमणको औजार मात्र हो भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। सरकारले...
७ मंसिर - दक्षिण कोरियाको ग्वाङ्जु सहरमा भरखरै निर्मित अत्याधुनिक म्युजियम घुमेर निस्कँदै गर्दा एकजना कोरियन मित्रले चिनाए– हाम्रो पछाडि म्युजियम घुमिरहेका व्यक्ति दक्षिण कोरियाका पूर्वसभामुख चुङ उई हवा हुन्। उनको अघिपछि कुनै सुरक्षाकर्मी थिएनन, स्वतन्त्र रूपमा उनी हिंडिरहेका थिए।
२९ कार्तिक - हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीभित्र देखिएका, नदेखिएका धमिराहरुको जगजगी छ। बिस्तारै रेशमी किराहरु पस्नु पर्छ। धमिराहरुको हुलसँग एकैपटकमा विजय हासिल गर्न सकिन्न। लडिरहनु, गगन थापा। थिति बसाल्ने कोशिसमा लागिरहनु। राजीनामावाला सस्तो लोकप्रियता बेकार छ। गगन थापाले राजीनामा दिएर फेरि सडकमा आएर भाषण गर्ने?...
२९ कार्तिक - त्यहाँ मानिसहरु कुन खाने कुरामा कति प्रतिशत बढी ठगिन्छन्, यो मेरो लागि कम चिन्ताको विषय हो। मेरो खास चासो चन्द्रागिरि हिल्सको एकाधिकारले देशले के पायो, नागरिकले के पाए भन्ने हो।
२० कार्तिक - पछिल्ला दिनमा गरिएका मत सर्भेक्षणहरुले श्पर्धा अझ ‘टफ’ बन्दै गैरहेको संकेत गरेका छन्। केही साता अघिसम्मका मत सर्भेक्षणहरुमा झण्डै दश प्रतिशतले अगाडी रहेकी हिलारी क्लिन्टनले पुरानो अन्तर गुमाउदै गइरहेकी छिन्। खासगरी, गोप्य सुचनाहरुले भरिएका इमेलहरुको प्रयोगका सम्बन्धमा एफबिआइले फेरि छानवीन शुरु...
१६ कार्तिक - भाइटीकाको अभ्यास भने तामाङ समुदाय र क्षेत्री-बाहुन समुदायबीच केही फरक छ। क्षेत्री–बाहुन समुदायले सप्तरङगी टीकाको साथमा रातो टिका लगाउँछन्। तर तामाङहरुले रातो टीका नलगाई सप्तरङ्गी टीका मात्र लगाउँछन्। सम्भवतः तामाङ समुदायमा रातोलाई नभई सेतो रङलाई पवित्र मान्ने गरिएकाले त्यस्तो भएको होला।
१५ कार्तिक - एक साताअघि एउटा समाचार आयो– गाईको बाच्छी काटेको अभियोगमा बागलुङका इन्द्रबहादुर नेपाली र सकस विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष कैद फैसला सुनायो। एकाध सञ्चारमाध्यमको ‘टुहुरे खबर’बाहेक यो विषय दुनियाँले सुन्ने गरी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’को चासो वा बहसमा परेन। तर, त्यसको केही दिनमै देशले ‘धुमधाम...
१४ कार्तिक - भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको छ। कार्तिक १७ देखि तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मुखर्जीले जनकपुर र पोखराको मात्रै भ्रमण गर्ने कार्यतालिका बनेको छ।
१७ कार्तिक - छोट्टी बस्ने गैरयौनजन्य र छोट्टी खेल्ने यौनजन्य क्रियाकलाप। साथीसाथीमा उक्त विषयमा पहिले नै कुरा हुने रहेछ बस्ने कि खेल्ने भनेर। पहिले नै सल्लाह भए अनुसार चार-पाँच युवती र चार-पाँच युवा अलि सुनसान ठाउँको गोठमा भेला हुने रहेछन्। त्यसरी भेला हुनेमा विवाहित महिलाले आफ्ना बाल्यकालका साथी बहिनी, भतिजी...
१३ कार्तिक - १९ बर्ष त सिस्नुपानीको नाउँमा देउसी खेलियो। हरेक वर्ष देउसीको तयारी गर्दा हामीलाई लागेको कुरा के हो भने, वर्षभरिका विभिन्न घटनाक्रमका बारेमा राम्ररी अध्ययन र त्यसबारे सूचना सङ्कलन गरिएन भने, त्यो देउसी झुर हुन्छ।
११ कार्तिक - हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने, डिजिटल पेन्टिङ कम्प्युटरको माध्यमबाट सिर्जना गरिने कला त हो तर कम्प्युटरद्वारा स्वसिर्जित कला भने होइन। परम्परागत कलाकारितामा जस्तै यसमा पनि चित्रकारले परम्परागत माध्यम जस्तै पेन्सिल वा चारकोलद्वारा स्केच गरि आयल कलर, एक्रिलिक कलर, वाटर कलार, पेस्टल्स, गउच आदि...
९ कार्तिक - साँझ ढल्दै गर्दा होस् वा शारदीय मधुरो घाममा होस् वा हिउँदको मध्य दिन, फुर्सद मिल्यो भने पैदल हिँडेर थुप्रै बाटा छिचोल्थ्यौं म र शैलेस सर। काँकरभिट्टामा सम्भवत हामीले त्यसरी गफ गर्दै नहिँडेका बाटा कुनै छैनन्। लगभग पाँच वर्षजति लगातार पैदल हिँड्यौं। कहिलेकाहीँ सोच्छु, कति किलोमिटर छिचोलियो होला ती...
ओम बम मल्ल
शब्द र चित्रमा त्यो मुस्ताङ-यात्रा
३ कार्तिक - दीपेश १८ वर्ष र खनुमाया १७ वर्षमा भागेर बिहे गरेका रहेछन्। आफूभन्दा माथि दाजु र दिदी भएकोले बिहे गर्ने पालो छिटै नआउने भएर भाग्नु परेको सुनाउँदै थिए दीपेश।
फेरि लयमा फर्कियोस् नेपाल
२२ असोज - दशैँमा टाढाको शुभकामना लाग्छ भने, नेपाल आफ्नो लयमा फर्किएको फेरि देख्न पाइयोस्। यही शुभकामना! विकास र परिवर्तन त शरीरका लागि मात्र हुन्, आत्माले त अन्ततः अरु थोकै माग्दोरहेछ।
क्या बात्! एनजिओ, आइएनजिओ
१० असोज - ‘मेरो दैनिकी तिम्रा हरेक समाचारलाई अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्दै डोनरलाई इमेल लेख्दैमा बित्ने गरेको छ,’ सिआरएस नामक आइएनजिओमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी स्निग्धा चक्रवर्तीले छोटो कुराकानीको क्रममा भनिन्, ‘प्रकाशित समाचारले मलाई मात्र होइन, सिंगो आइएनजिओलाई सही मार्ग देखायो।’
बेइजिङमा दशैँ सम्झना
२५ असोज - मेक्सिकोमा संसारमै सबैभन्दा थोरै सार्वजनिक विदा एक हप्ता हुन्छ। चीनमा वर्षमा जम्मा ११ दिन विदा दिइन्छ। अति कम विकसित नेपालमा भने झण्डै १०० दिन विदा हुन्छ भने मैले न्यास्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण छ र !
हिलारीमा अल्झेका छन् हाम्रा आँखा
१७ साउन - सन् १९९५ को अप्रिल महिनामा हिलारी क्लिन्टन र उनकी छोरी चेल्सी नेपाल उत्रिए। प्रथम अमेरिकी महिलाको हैसियतमा हिलारी नेपाल भ्रमणमा आउँदाको सम्झना अझै ताजा छ। तत्कालीन महारानी ऐश्वर्य र अधिराजकुमारी श्रुतिले विमानस्थलमा हिलारी र चेल्सीको स्वागत गरेका थिए।
हामी एक–अर्काका लागि हौं, आऊ विपतमा काँध थापौं!
१२ साउन - अस्ति निकै रोयो आकाश। झरी भनेपछि सँधै रमाइलो मान्ने मन रमाएन। एकतमासले उदासी छायो। हामीसँग आपतहरूको कमी छैन, ए झरी! थप केही सुन्न नपरोस् भनिरह्यो। भनेजस्तो भएन। सुनिन थालियो विपतका कुरा। दुःखका कुरा।